ऊन्ले सोधे तपाई नै विनोद रोका हो? – NepalayaNews.com
ऊन्ले सोधे तपाई नै विनोद रोका हो?
१३ कार्तिक २०७७, बिहीबार १४:४४
२८ अक्टोवर २०२०
यी नव आगन्तुकहरु मेरो नया क्लाईन्ट थिए। यीनीहरुलाई मेरा अर्का क्लाईन्ट शेर्पाभाईले सिफारिश गरेका रहेछन। पेशामा लामो समयसम्म उठबस हुदा यो परदेशमा क्लाईन्टहरुसंग पनि दाजुभाई, दिदी बहिनी र आफन्तीको जस्तै सम्वन्ध गासिदो रहेछ। शेर्पाभाईसंग पनि यस्तै नजीकको सम्वन्ध छ। हामी एक अर्कालाई माया र विशवास गर्दछौ। र एक अर्कामा राम्रा गुणहरु नै देख्दछौ। त्यसैले आऊनु भन्दा अगाडीनै मलाई फोन गरेर शेर्पाभाईको रेफरेन्स दिएका थिए। उन्ले भनेथे “ मेरो वकिल त अर्कै हो तर शेर्पाजीले तपाई एकदम राम्रो हुनुहुन्छ। सबै काम आफैले हेरि दिनु हुन्छ। खोजेका बेलामा भेटन र बोल्न पाईन्छ भन्नु भएकाले आऊन लागेको।” मैले सुरुमा त यो कोरोना साम्य भएपछि आऊनुस न भने। तर ऊन्ले मानेनन। अनि मैले पनि नाई भन्न सकिन। शेर्पाभाईले मेरो लागि व्यक्त गरेको विश्वासलाई मैले उन्का लागि मात्रै भएपनि कायमै राख्नु थियो। जिवनको मोडहरुमा बिरलैमात्र यस्ता सज्जन र हितैसि मान्छेहरु पाईन्छ जस्ले अरुमा केही राम्रा गुणहरु देख्छ।
अनि मैले यो घटना शेर्पाभाईलाई फोनबाट सुनाए। उन्लाई जिस्कीदै भने भाई तिमिले मलाई कसरी चिनायौ< तिमिले पठाएकोले मान्छेले त काम गरि सकेपछि पनि मलाई विनोद रोका हो भनेर विश्वासै गरेनन। अब देखि यस्तो भ्रम पर्ने गरी अरुलाई मेरो परिचय नदेऊ है। मेरो कुरा सुनेर शेर्पाभाई धित मारेर हासे। र भने दाई कहिले काहि यस्तो रमाईलो घटना घटछ। र यस्ले फाईदा पनि गर्छ। अनि उन्ले आफुलाई नेपालमा हुदा माओबादीहरुसंग भएको घटना स्मरण गराए। ऊन्ले भने दाई म एऊटा रिर्सोट चलाएर बस्थे। माओबादीहरु अग्रिम सुचना दिएर चन्दा माग्न रिसोर्टमा आएका थिए। म त्यसबेला सफाईको काम गरि रहेको थिए। मलाई सोधे तिमि काम गर्ने मान्छे हो? मैले हो भने। अनि मलाई माओबादीहरुले भने यो रिसोर्टको मालिक फलानो कहा छ बोला त< मैले भने मलाई थाहा भएन हजुर। म त काम गर्ने मान्छे हो। अनि ती माओबादीहरुले भने मालिक आएपछि हामी आएका थियौ भनि दिनु है भन्दै चन्दाको चिठृी थमाएर गए। यस्तै यस्तै घटनाहरु मसंग पहिला पनि घटेका थिए। अनि मैले एउटा गीत लेखेको थिए। म त खाली थिए कसैले नाम लेख्यौ। त्यही नामले मलाई छेक्यो। आदि। र त्यो गीतलाई जानी नजानी आफैले गाएर मोबाईको भ्वाईस मेमोमा रेकर्ड गरे। त्यो रेकर्ड मेरा ध्यानबन्धु एवं आईटी प्रोफेशनल आभाष पोखरेललाई दिए। उन्ले केही दृष्यहरुको संयोजन गरी दिए। अनि मैले आफनो सोख मेटाऊन यु ट्युबमा अपलोड गरे। https://www.youtube.com/watch?v=wu4GNVIU-rQ&feature=share&fbclid=IwAR3L9tD45mJdil5-ebBREMoOJZos85rkTAoPUpDb5SfYfdy_HTXewJdPFSM
विद्यार्थीबाट व्यवसायमा फड्को मार्दै एनआरएनतिर १३ कार्तिक २०७७, बिहीबार १४:४४
एमाजनको २ अर्ब डलर बराबरको शेयर बिक्री १३ कार्तिक २०७७, बिहीबार १४:४४
कोभिड विरोधी खोपमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार छूट दिने अवधारणाको समर्थनमा अमेरिका १३ कार्तिक २०७७, बिहीबार १४:४४